Foxconn Sees Full China Production Resuming in Late February | Myanmar Business Today
Home Business Regional Foxconn Sees Full China Production Resuming in Late February
Foxconn Sees Full China Production Resuming in Late February
The logo of Foxconn, the trading name of Hon Hai Precision Industry, is seen on top of the company's building in Taipei, Taiwan, March 30, 2018.
Taiwan’s Foxconn said it aims to gradually restart operations at factories in China this week but it could take one to two weeks from then to resume full production due to the coronavirus outbreak,aperson with direct knowledge of the matter said.
Foxconn, which makes smartphones for global vendors including Apple, has filed requests to reopen factories with Chinese authorities, the source said, adding thatafull resumption was not possible until late February due to various travel restrictions imposed to curb the virus.
Foxconn said it does not comment on specific production practices but the company has “measures in place to ensure that we can continue to meet all global manufacturing obligations”.
Companies in China, closed for the Lunar New Year holiday, were told to stay shut for an extra week, until as late as February 10, including those in the southern manufacturing hub of Dongguan in export-oriented Guangdong province, where some iPhone plants are located.
The company will use local workers as much as possible while allowing time off for those who cannot travel long distances to get back to work, according to an internal document reviewed by Reuters.
Shares of Foxconn, formally known as Hon Hai, have dropped more than 10 percent since the market reopened following the Lunar New Year holiday.
ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Foxconn က ၎င်းတို့အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံများကို ယခုသီတင်းပတ်မှစတင်ကာ လည်ပတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပြောသည်။ သို့သော် coronavirus ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည် လည်ပတ်နိုင်ရန်အဆိုလျှင် သီတင်းပတ် တစ်ပတ်မှ၊ နှစ်ပတ်အထိ ကြာနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိထားသော သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးအရ သိရသည်။
Apple အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ စမတ်ဖုန်းလုပ်ငန်းများအတွက် စမတ်ဖုတ်းများ ထုတ်လုပ်နေသည့် Foxconn သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်ရုံများကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် တရုတ်အာဏာပိုင်များကို တင်ပြထားကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။ ဗိုင်းရပ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ခရီးသွားလာမှုအပေါ် တာမြစ်ထားခြင်းကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီလ နေှာင်းပေါင်းအထိ အပြည့်အဝပြန်လည် လည်ပတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် နှောင့်နေးမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့နည်းပညာလုပ်ငန်း၏ supply chain အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီး Foxconn ၏ ဖောက်သည်များထံ ပစ္စည်းများ တင်ပို့မှုအပေါ်လည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။
“နိုင်ငံရဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ လမ်းပိတ်ထားတယ်။ တချို့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ အချိန်မီ ပြန်ရောက်နိုင်မလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး” ဟု သတင်းရင်းမြစ်က ဆိုသည်။
“အပြည့်အဝပြန်လည် လည်ပတ်ဖို့ဆိုရင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်ကနေစတွက်ရင် တစ်ပတ်ကနေ၊ နှစ်ပတ်အထိ ကြာသည်”
အချို့မြို့များတွင်တော့ အာဏာပိုင်များကလည်း အခြားပြည်နယ်မှပြန်လာသည့် အလုပ်သမားများကို သုံးရက်ကြာ ခွဲခြား စောင့်ကြည့်ရန် ကုမ္ပဏီများကို အမိန့်ပေးထားသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အမိန့်ပေးထားခြင်းကြောင့် Foxconn ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
“လူပေါင်းသောင်းချီကို သုံးရက်တိတိ သီးသန့်ခွဲခြား စစ်ဆေး စောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ” ဟု အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။
စက်ရုံရပ်နားထားရခြင်းကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် Foxconn၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိခိုက်နိုင်မည့် အနေအထားရှိပြီး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အကျိုးဆက်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လျက်ရှိသည်။
“အကျိုးအမြတ်ကတော့ ထိခိုက်မှုရှိမှာ သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ထိခိုက်နစ်နာမလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အခု တွက်ချက်နေပါတယ်”ဟု အဆိုပါ သတင်းရင်းမြစ်က ပြောသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရာတွင် အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Foxconn သည် သိန်းချီသော အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် အစီအမံများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
Previous articlePhilippines Steps Up Security to Shield Power Grid
Next articleVirus Concerns Drive Up Chinese Demand for Mexican Beef